इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्व : कुन देश कसको पक्षमा ? - Kohalpur Trends
४ जेठ, काठमाडौं । एक हप्तादेखि इजरायल र प्यालेस्टाइनबीच रक्तपातपूर्ण आक्रमण जारी छ । इजरायलको आक्रमणबाट गाजामा भारी क्षति पुगेको छ ।
प्रमुख युरोपीय देश फ्रान्स, बेलायत र जर्मनी पनि इजरायलको पक्षमा छन् । त्यसैले संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदमा इजरायल र प्यालेस्टाइनबीचको मुद्दामा भिटो आवश्यक पर्यो भने इजरायललाई फाइदा हुने बीबीसीले जनाएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदमा रुस र चीन पनि स्थायी सदस्य छन् । इजरायल–प्यालेस्टाइनबीच जारी द्वन्द्वको विषयलाई लिएर चीनले अमेरिकाको चर्को आलोचना गरेको छ ।
Previous Previous post: 2078 Jestha _04
Next Next post: ललितपुरमा ६ जेठदेखि चिनियाँ खोपको दोस्रो डोज, कहाँ–कहाँ लगाइँदैछ ? (सूचीसहित)